နာပိုလီ ကို ရောက်တော့မယ့် ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူ ၊ အာဆင်နယ် ကို နှုတ်ဆက်တော့မယ့် လူငယ်ကြယ်ပွင့် တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
နာပိုလီ ကို ရောက်တော့မယ့် ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူ ၊ အာဆင်နယ် ကို နှုတ်ဆက်တော့မယ့် လူငယ်ကြယ်ပွင့် တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
အီတလီ စီးရီးအေ ကလပ် နာပိုလီ အသင်းဟာ အက်စတွန် ဗီလာ မှာ အငှား ထွက် ကစားနေတဲ့ နောက်ခံလူ တွမ်ဇီဘီ ကို အငှား နဲ့ ခေါ်ယူရာမှာ ယူရို ၆ သိန်းတန် အငှားခေါ်ယူကြေး ကို ( ၁ ) ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် ရရှိပါက ၄ သိန်း ( ၂ ) သတ်မှတ်ပွဲ အရေအတွက် ပြည့်ပါက ၂ သိန်း ဆိုပြီး ပေးချေ ရမယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
နာပိုလီ တိုက်စစ်မှူး အင်ဆစ်ညာ ဟာ အမေရိက မေဂျာလိဂ် ကလပ် တိုရွန်တို အသင်းဆီ ဇွန်လ ၂၀၂၂ မှာ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိ ခဲ့ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
အင်ဆစ်ညာ ဟာ တိုရွန်တို အသင်း နဲ့ ၅ နှစ်ခွဲ သက်တမ်း ရှိမယ့် စာချုပ်ကို ချုပ်ဆို သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အိုင်ယက်စ် အသင်းရဲ့ ဂိုးသမား အိုနာနာ ဟာ ဒီကနေ့ မှာ မီလန်မြို့ ကို ရောက်ရှိ လာခဲ့ပြီး အင်တာမီလန် အသင်း နဲ့ ဆေးစစ်မှု ပြုလုပ် တော့မယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ နည်းပြ ဇာဗီ ကတော့ သူဟာ တောင်ပံ ကစားသမား ဒမ်ဘီလီ ကို စာချုပ်သစ် ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ဖို့ ခွင့်ပြု ထားပြီး ဒမ်ဘီလီ ထံက အကြောင်းပြန်မှု ကို စောင့်ဆိုင်း နေပါတယ်လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ကွင်းလယ်လူ ဖိလစ်ပီ ကော်တင်ဟို နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ခုချိန်ထိ သူ နဲ့ ဘရာဇီးသားတို့ တွေ့ဆုံ စကားမပြောဆို ရသေးပါဘူးလို့ ဇာဗီ က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ယူဗင်တပ် မှာ အငှားထွက် ကစားနေတဲ့ အေတီကို တိုက်စစ်မှူး မိုရာတာ ကို မမ်းဖစ် ဒီပိုင်း + ငွေသား နဲ့ ခေါ်ယူလို ပေမယ့် ယူဗင်တပ် ရော အေတီကို မက်ဒရစ် ကပါ ဒီပိုင်း ကို မခေါ်ယူ လိုတာကြောင့် အခြား ပုံစံ တခုကို ပြောင်းလဲ ကမ်းလှမ်း ရဖို့ ရှိလာတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် အသင်းကတော့ တောင်ပံ ကစားသမား အန်ဟဲ ကော်ရီယာ ကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် အထိ စာချုပ် သက်တမ်းတိုး ချုပ်ဆို လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ထုတ်ပြန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ကတော့ လူငယ် ကစားသမားလေး မစ်လန်း နိုင်းလ် ကို ရိုးမား အသင်းထံ အငှား + အပြီးသတ် ဝယ်ယူခွင့် ပုံစံ နဲ့ လက်လွှတ် ဖို့ ရှိနေပြီလို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဆောက်သမ်တန် အသင်း ကိုတော့ ဆားဘီးယား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦး ဖြစ်တဲ့ ဒရာဂန် ဆိုလတ် က ပေါင် သန်း ၁၀၀ ကျော် နဲ့ ဝယ်ယူဖို့ နီးစပ် နေပြီလို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဆိုလတ် ရဲ့ ရုပ်သံ ကုမ္ပဏီ ဟာ ဆောက်သမ်တန် ပိုင်ရှင် ကောင်ဂျီဆန် နဲ့ တွေ့ဆုံ နေပြီး အသင်းရဲ့ ရှယ်ယာ ၈၀% ကို ဝယ်ယူဖို့ ဆွေးနွေး နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဟာ ဖီအိုရင်တီးနား တိုက်စစ်မှူး ဒူဆန် ဗလာဟိုဗစ် အတွက် ပေါင် ၄၆ သန်း + လူးကပ်စ် တော်ရဲရား တို့နဲ့ ကမ်းလှမ်း ထားတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . .
Previous Article အမ် ဘာပေ အတွက် ယူရို သန်း 50 နဲ့ စတင် ပြန်လည် ကမ်းလိုက်တဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ်
Next Article ဝုလ်ဗ် နဲ့ ပွဲမှာ ယူနိုက်တက် အတွက် ဘယ်သူ အကောင်းဆုံး ကစားပေးခဲ့သလဲဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ မီကာ ရစ်ချက်